(sno) news » 50 sano kadib somaliya aduunka ma hogaamindoontaa mise waa ku hafandoontaa. – Acai Colon Cleanse
(sno) news » 50 sano kadib somaliya aduunka ma hogaamindoontaa mise waa ku hafandoontaa.
MUQDISHO:- Marka indhahaagu qabtaan ciwaankaan qormadeyda waxaa suuro gal ah in aad u aragto wax iska qeyru caadi ah balse waa riyo macquul ah.
Tan iyo markii jamhuuriyadii Somaliyaa ay udbaha u siiben jabhado hubeysan , waxaa ka qarxay dalka dagaalo aad u qaraar , kuwasoo ilaa iyo hada socda, iyagoo wajiyo badan yeeshey.
Inta ay socdeen dagaaladaas waxaa dadka soomaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ay ka sii tilaabayeen xuduudaha wadamo shisheeye, waxeyna ku kala faafeen dhamaan caalamka intiisa badan.
Faafitaanka Somalida ee aduunka wuxuu isasiitarayey hadba marka ay sii kororto colaada ka aloosan wadan kooda Hooyo ee Soomaaliya, waxayna si miir la’aan ah uga tilaabeen xuduudo ka gudbidoodu aad u adagtahay.
Waxaan intaas sii dheer Soomaalida sida muuqata ma noqon dad meel iska fariistay ee waxay dedaalo xoogan ka galeen meelihii ay tageen ha ahaadeen dhinaca wax barashada, dhaqaalaha, iyo wixii horumar ah ee ay ku tilaabsan kareen.
Waxaa muuqaneysa maanta in inta badan caalamka ay ka dhisanyihiin jaaliyado wax qabadkoodu muuqdo sidey donaan wax ha u qabteene, in kastoo jaaliyadahaas qaarkood ay si xun usii shideen dabkii ay uga carareen dalkooda, hadana waxaa xusid mudan in nolosha Soomaalida gudaha ku jirta ay Qatar gali laheyd hadii aan jaaliyado jiri lahayn.
Si kastaba ha ahaatee waxaa muuqanaya in Soomaalidu ay mudnaan ku dhexyeesheen wadamadii iyo bulshooyinkii ay dhexgaleen, waxaana la arkayaaa wadan hebel oo maanta mawaadin Somaliyeed isku soo taagy jago xildhibaanimo ama Gudoomiye Gobol iyo jagooyin kale oo muhiin ah, taasi oo ah mid aad saro ugu qaadeysa sharafta dadka Somaliyeed.
Dhinaca kale waxaa meesha ka maqan nabad galyadii ay dib ugu soo laaban lahaayeen wadankooda si ay horumar u gaarsiiyaan, waxeyna Soomaalida qurbo joogta ah u muuqdaan waqtigaan diyaarad garoonkii ay ka kacday duqeysey hadana la’ meel ay ku dagto.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalidu waqti xaadirkaan hadii ay heli lahaayeen nabad galyo buuxdo waxaa suuro gal ah in ay wadankooda u hogaamiyaan in uu noqdo hogaanka caalamka, marka aan sidaas leeyahay mahan fikrad Qar iska tuurnimo ah , balse waa wax macquul ah waayo Soomaalidu waxey horumar ka sameynayaan dhamaan inta badan caalamka, waxaan suuro gal ah in 50 sano kadib ay soo baxaan dad Somaliyed oo kala hogaaminaya bulshooyin kaladuwan taas oo mac quul ka dhigeysa in ay noqdaan dad muhiim u ah isku xirka caalamka, taa badalkeeda hadii ay adkaato in nabad degdeg ah aan lahelin, dagaaladunu ay sii socdaan iyogoo sii casriyoobaya, waxaa macquul ah markaas in la waayo cid ku nool gabi ahaanba gayigii la oron jiray Somalia, waayo dadka intii ka bixi kartana wey ka bixi doonaan intii kale wey ku dhamaandoonaan taasna waa waxaan ilahay ka magan galeyno.
w/qorey,,xasan macalin xusen(pilot)
Best friends » senior divorce
Www.somaliunit.com :: view topic – epileren